4 bilyan ayaan suurtagal u laheyn internet - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isabella Lövin, wasiirka horumarka caalamiga ee Sweden. Sawirle: Kenadid Mohamed/SR
4 bilyan ayaan suurtagal u laheyn internet
La daabacay onsdag 27 januari 2016 kl 15.12
Caalamka ayaa maanta ku jira is-bedelkii hor-u-marineed ee xilliga tiknoloojiyada casriga ah ee is-gaarsiinta ee taariikhda soo marta.
Halka dhanka kale 40% bulshada caalamka ku dhaqan ey nasiib u yeesheen iney ku xirmi karaan ama isticmaalaan aaladda internet-ka maalin walba. Sidoo kale tobankii ruuxba toddoba aya haysta aaladda telefoonnada ee mobaaylka. Fuqarada caalamka ku dhaqan ayaa ka door-bidaya iney helaan mobaayl, halkii ey ka heli lahaayeen musqullo ama biyo nadiif ah. Waana mid loo baahan yahay in laga faa’iideeysto hor-u-marka deg-degga ah ee dhanka teknoolijiyada si bulshada caalamka ku dhaqan loo gaarsiiyo barwaaqo iyo sinnaan. Bulshooyin badan ee caalamka ku nool ayuu hor-u-marka casriga ee dijitaalku suurtagal u siinayaa iney yeeshaan doorashooyin kala duwan iyo baraare, aaney suurtagal u heli kari laheyn haddii kale. Dalka Keenya tusaale ahaan ayuu hoos u dhacay 90% kharashkii ku bixi jiray kolka lacag la isku direyo, wixii ka dambeeyay kolkii carrigaa laga bilaabey nidaamka loo yaqaanno M-Pesa, ee lagu bixiyo aaladda Dijitalka.
Halka ey 4 malyan oo ka mid ah caalamka dunida ku nool ey maalin walba suurtagal u tahay iney Google akhbaaro ku raadsadaan ayey dhanka kale 4 malyan oo kale aaney suurtagal u hey-san internet, sida ku cad war-bixin loogu magac-darey
”World Devlopment report 2016 – war-bixinta hor-u-marka caalamka 2016”, oo toddobaadkan lagu soo ban-dhigay xarunta hayadda taageerada caalamiga Sweden ee magaceeda loo soo gaabiyo SIDA.
60% bulshada ku dhaqan caalamka ayaaney suurtagl u aheyn iney isticmaalaan aaladda internet-ka, sida ku cad war-bixinta hor-u-marka caalamka ee sannadka 2016. Middaasina oo saameyn ku yeelaneysa dhinacyada kala duwan ee nolosha bulshooyinkaa.
Isabella Lövin, wasiirka hor-u-marinta caalamiga ee dalka Sweden:
- Howlahaa ayaa ku socda si aan degdegsiimo lahayn, halka dhanka kale ay bulshada caalamku dhigatay gool la hiigsaneyo ugu dambeeyn sannadka 2020 iney dhammaan bulshada caalamka ku dhaqani suurtagal u helaan teknoloojiyada cusub iyo aaladda internet-ka. Waana gool uu hami badani ku dheehan yahay. Iyadoo hadalkeedii sii wadatana sheegtay wasiiraddu:
- Hase yeeshee waa gool suurtagal ah, maadaama uu hor-u-marku si xawli leh ku socday 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Maadaama aaney dadyoow badani muddo labaatan sannadood iminka laga joogo aaney jirin amaba yaraayeen cid garaneeysay waxa uu internet-yahay, isla-markaana aaney dalkan Sweden qudhiisa suurtagal u ahayn. Haddase waa inaan suurtagal u siinnaa caalamka dhammaan suurtagallada internet iyo aaladaha dijitaalku leeyihiin ama looga faa’iideey-san karo, sida ay sheegtay Isabella Lövin, wasiirka hor-u-marka caalamiga ee Sweden.
Soomaalya oo ka mid ah waddammada dhaca bariga geeska Afrika ayay sheegtay wasiiraddu inay tusaale u tahay sida degdegsiin yaha leh ee caalamku ugu tallaabsanayo hor-u-marka dhanka teknoloojiyada iyo isticmaalka aaladda internet-ka, iyo in qaar badan oo bulshada ka mid ahi ey iminkaba isticmaalaan aaladda mobaaylka. Lövin iyo mar kale:
- Waa mid lagu farxo in qaar badan oo bulshada ka mid ahi haystaan/isticmaalaan aaladda mobaaylka. Waxay middaasi tusaale wacan u tahay sidii loo qiimeeyn lahaa tayada iyo tirada hor-u-marineed. Iyada oo aan la soo marin dhabbadii aannu soo marney ee telefoonnada guryaha la isticmaali jirey in markiiba loo boodo aaladda mobaaylka, sida ay sheegtay Isabella Lövin, ahna wasiirka kaalmada caalamiga ee dalka Sweden.
- Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay in la helo xeerar iyo kaabiyeyaal ku habboon oo ku tallaab-san kara sidii bulshada dhammaan loo gaarsiin lahaa hor-u-markaa.